Obodo Jersey | October 2021
Isi > Obodo Jersey
primal Jersey sizing
Primal jersey sizing - ngwọta dị irè
Kedu ka uwe primal si adaba? Iji were ohere ọrụ teknụzụ nke akwa Primal gị zuru oke, o kwesiri ịbịaru ahụ nso ka mmiri wee wepụta akpụkpọ ahụ nke ọma iji nyere gị aka ịjụ oyi na nkụ. Ngwaahịa a zuru ike. Ezubere ka ị nabata ma dabara adaba maka mmetụta nkịtị.
Peter sagan green jersey enwetawo
Peter sagan green jersey merie - otu esi edozi
Nwere ike Sagan merie akwa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ? Ma a na-enwetakarị uwe na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ site na talent zuru ezu na ikike iji mechaa dị elu na ọtụtụ ụyọkọ mgbe ị na-emepụta nsonaazụ na onye ọkpọ ahụ mechara mechaa Peter Sagan ndekọ asaa mmeri. 24. 2021.
acha ọcha jerịgharịa
White jersey vuelta - ịza ajụjụ ndị a
Kedu ihe dị na Vuelta? Onye ndu n'ozuzu ugbu a na-eyi uwe na-acha uhie uhie, ọ bụ ezie na n'oge gara aga ọ bụ 'Maillot amarillo' (Yellow jersey) na 'Jersey de Oro' (Golden jersey) ndị Spain na-acha odo odo nke Tour de France.
Ogwurugwu jersey - esi edozi
Gịnị ka egwurugwu jersey na-agba ịnyịnya? Egwurugwu egwurugwu bụ uwe pụrụ iche nke ndị mmeri ụwa na-eyi n'oge agbụrụ. Dịka ọmụmaatụ, onye na-agba ọsọ n'okporo ụzọ ụwa ga-eyi uwe ahụ mgbe ọ na-asọ mpi n'ọsọ egwuregwu na agbụrụ otu ụbọchị, mana ọ gaghị eme n'oge ule oge.